September 18, 2021 N88LeaveaComment on छात्रवृत्ति पाउनकै लागि जहाँ छात्राहरुले कुमारित्व परीक्षण गराउनुपर्छ !
एजेन्सी । गरीब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने चलन प्राय सबैतिर हुन्छ र प्रायः विश्वभरमै विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरणको मापदण्ड यहीँ हो । तर दुनियमा एउटा यस्तो देश पनि छ जहाँ छात्राहरुले विद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउनका लागि केवल गरिब र जेहेन्दार भएर मात्र पुग्दैन कुमारी अर्थात् भर्जिन पनि हुनुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाको उथुकेला सहरमा विद्यार्थी किशोरी तथा […]
कस्ताे अचम्म महिनावारी हुने युवक
September 18, 2021 N88LeaveaComment on कस्ताे अचम्म महिनावारी हुने युवक
एजेन्सी । पुरुषको पनि रजस्वला हुन्छ ? सुन्दा पत्यार नलाग्ला । यस्तै घटनामा बेलायतमा भएको छ । जर्ज फेलोज नामक २२ वर्षीय युवकले आफूलाई मासिक रूपमा रजस्वलाको पीडा महसुस हुने कुरा बताएका छन् । फेलोज आफ्नी गर्लफ्रेन्ड एम्बर मे एलिससँग लिभिङ टुगेदरमा छन् । एलिस जब रजस्वला हुन्छिन्र उनको तल्लो पेट दुख्न थाल्छ तब फेलोजको […]
१९ वर्षीया किशोरीको दुईवटा यो’नी भेटियो
September 18, 2021 September 19, 2021 N88LeaveaComment on १९ वर्षीया किशोरीको दुईवटा यो’नी भेटियो
एजेन्सी । बेलायतका एक किशोरीको दुईवटा यो’नी भेटिएको छ । बेलायत गिलिङघाम केन्टस्थित १९ वर्षीया किशोरी मोली रोज टेलरमा महिनावारी समस्या थियो । महिनावारीमा समस्या भएपछि उनी अस्पताल गएकी थिइन् । डाक्टरले उपचारको क्रममा मोलीको दुईवटा यो’नी भएको पत्ता लगाएको हो । ९ वर्षको हुँदादेखि उनले महिनावारी निकै पीडादायी भएको बताउँदै आएकी थिइन् । चिकित्सकले […]
मन्त्री बन्न ज्वाइँको पावर, काण्डमा मुछिएका महरा–श्रेष्ठले खुमलटारमा उत्पात मच्चाए
September 18, 2021 N88LeaveaComment on मन्त्री बन्न ज्वाइँको पावर, काण्डमा मुछिएका महरा–श्रेष्ठले खुमलटारमा उत्पात मच्चाए
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका आफूलाई सिनियर भन्ने नेताहरूले मन्त्री बन्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई हदैसम्मको दवाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न ढिलाइ गरिरहेका बेला माओवादीभित्र पटक–पटक मन्त्री र अन्य अवसर पाएका नेताहरू मन्त्री बन्न जोडजुलुम गरेका हुन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, दीनानाथ शर्मा, हरिबोल गजुरेल, मातृका यादव, गिरिराजमणि पोखरेललगायतका नेताहरू […]
अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई ओलीको फोन
September 18, 2021 N88LeaveaComment on अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई ओलीको फोन
काठमाडौं । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले चर्चित अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरलाई फोन गरेका छन् । मानन्धरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अध्यक्ष ओलीले आफूलाई फोन गरेको जानकारी दिएकी छिन् । उनले फोनमा ओली भनेर आउँदा सुरुमा आफू छक्क परेको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । उनले फोनमा ओलीको आवाज सुन्दा आफूलाई घर मुलिले छोराछोरीसँग बोलेजस्तो लागेको जनाएकी छिन् । […]
झाँक्री दीदीले कसलाई भनिन् हँ ! ‘भगौडा जर्नेल’हरुलाई कमान्डर मान्न सकिँदैन’
September 18, 2021 N88LeaveaComment on झाँक्री दीदीले कसलाई भनिन् हँ ! ‘भगौडा जर्नेल’हरुलाई कमान्डर मान्न सकिँदैन’
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेमा फर्किएका नेतालाई जिम्मेवारी दिन नसक्ने बताएकी छन् । शनिबार सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले युद्धबाट भाग्नेहरुलाई फेरि ल्याएर कमान्डर बनाउन नसक्ने बताएकी हुन् । ‘युद्धबाट भाग्नेहरुलाई फेरि ल्याएर कमान्डर बनाउन सकिँदैन’ उनले भने, ‘युद्धबाट भागेका युद्ध अपराधीजस्तालाई किमार्थ माफी गर्नु हुँदैन । तर सरेन्डर गरे भने […]
देउवा र ओली मिलेर पुलाउ पकाउन थाले प्रचण्ड-माकुनेलाई छटपटी ? देउवाले फेरि बालकाेट पठाए विशेष दूत
September 18, 2021 September 18, 2021 N88LeaveaComment on देउवा र ओली मिलेर पुलाउ पकाउन थाले प्रचण्ड-माकुनेलाई छटपटी ? देउवाले फेरि बालकाेट पठाए विशेष दूत
काठमाडौं । सरकार गठन गरेको दुई महिना बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको आ’रोप लागेका प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न फेरि दूत खटाएको खुलेको छ । यसअघि पनि उनले ओलीलाई भेट्न विभिन्न नेताहरूलाई पठाएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा ख”टपट भएको खबर […]
रामकुमारी झाँक्री बारे फैलियाे रातारात यस्ताे हल्ला, के हाे वास्तविता ?
September 18, 2021 N88LeaveaComment on रामकुमारी झाँक्री बारे फैलियाे रातारात यस्ताे हल्ला, के हाे वास्तविता ?
काठमाडाैं । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी चर्चित नेतृ राम कुमारी झाक्रीले एकाएक पार्टी छाडेको चर्चा चलेको छ । मीनभवनस्थित भीएस निकेतन स्कुल नजिकै खोलिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी कार्यालयको उद्घाटनमै उपस्थित नभएपछि उनले पार्टी छाडेको गाईगुई चलेको हो । मीनभवनस्थित भीएस निकेतन स्कुल नजिकै खोलिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी कार्यालयको बार्दलीमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले मुठ्ठी […]
माधव नेपालको पक्षमा खुलिन अष्टलक्ष्मी शाक्य, बागमती प्रदेश नयाँ खेल
September 18, 2021 N88LeaveaComment on माधव नेपालको पक्षमा खुलिन अष्टलक्ष्मी शाक्य, बागमती प्रदेश नयाँ खेल
काठमाडाैं । नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष एवम् बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले माधव नेपालले भनेर नै आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बताएकी छन्। शनिबार महोत्तरीमा पाटी कार्यकर्तासँगको भेटघाटका क्रममा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै आफ्नो सरकार अहिले अल्पमतमा रहेकाले छिट्टै विश्वासको मत लिने बताइन् । नेकपा एमालेको आन्दोलनलाई मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै उनले माधव नेपाललाई संस्थापन पक्षमा […]
प्रचण्डले राखेको एउटा शर्त पुरा भए एमसीसी पास हुने पक्का, यस्तो छ शर्त !
September 18, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डले राखेको एउटा शर्त पुरा भए एमसीसी पास हुने पक्का, यस्तो छ शर्त !
काठमाडाैं । नेपालमा एमसीसी परियोजनाको सन्दर्भमा भएको ‘प्रगति’बारे जानकारी लिने तथा त्यसलाई संसदबाट पास गराउन सरकार एवम् प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई झक्झक्याउने उद्देश्यका साथ गत साता नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बिनाउत्साह वासिङ्टन फर्किएकी छन्, यद्यपि उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुदानसम्बन्धी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने विश्वास दिलाएका छन् । केपी ओली नेतृत्वको […]